Sweden: xiriirka Mareykanka halkeedaan ka sii wadeynaa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ra'iisalwasaaraha Sweden Stefan Löfven iyo madaxweynaha la doortay ee Donald TrUMP
Sweden: xiriirka Mareykanka halkeedaan ka sii wadeynaa
Sida hoggaamiyaasha Sweden uga hadleen doorashada Trump
La daabacay onsdag 9 november 2016 kl 09.29
Hoggaamiiyaasha Sweden ayaa saakay shaaciyey in Sweden halkeeda ka sii wadi doonto xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dalka Mareyknka, kadib markii uu doorashada madaxweyne ku soo baxay Donald Trump.
Hoggaamiiyaasha Sweden ayaa saakay shaaciyey in dowladda Sweden halkeeda ka sii wadeyso xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dalka Mareyknka, kadib markii uu doorashada madaxweynaha dalkas ku soo baxay Donald Trump.
Ra’iisalwasaaraha Sweden Stefan Löfven iyo wasiirka arrimaha dibadda Margot Wallström ayaa sheegay labaduba in ay la shageyna doonaan dowladda Mareykanka ee xukunkeeda dhawaan la wareegi doono Donald Trump.
- Waan u diyaar garowneyn sidaan ula xiriireyno labada mushrax midka soo baxa, Sweden sida ay weligeed sameynso xisbi kastee uu ka tirsan yahay madaxweynaha maryekanka waxaan raadinaa sida ugu wanaagsan oo xiriir wanaagsan ula yeelan laheyn, markaa waa u diyaar garowneyn xaalkan, wax fajac ahna naguma abuurin natiijada doorasahd ayuu yeri Löfven.
Margot Wallström ayaa iyadu ka qoomamaysay in ay horey si furan u taageertay Hillary Clinton. Balse waxay ballanqaadey in la waanaajinayo xiriirka wado-shaqeyn ee Mareykanka iyo Sweden, waase arki doonaa ayey siyaasadda uu la yimaado Trump.